‘सीमानामा रेलको थुतुनो घुसार्ने मात्र होइन देशलाई नै रेल सञ्जालले जोडिनेछ’ - Dalit Online - Dalit Online
१८ असार २०७५, सोमबार ०३:२२
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुचर्चित चीन भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका छन् । गत असार ४ गते चीन प्रस्थान गरेका ओली १० असारमा नेपाल फर्किए । निकै आशा गरिएको चीन भ्रमणको उपलब्धी के रह्यो त ? तिब्बतको ल्हासामा प्रधानमन्त्रीसँग राससका लागि हरि लामिछानेले गरेको कुराकानी :
-धेरै घण्टा काम गर्ने मेरो आदत नै बनेको छ । सत्र/अठार घण्टा काम गर्दा मलाई त्यस्तो असुविधा हुँदैन ।
चीन सरकारले उच्च सम्मानका साथ यहाँलाई स्वागत गर्यो यो सँगै १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भई नै सकेको छ, सारमा यसबाट हामी कत्तिको उत्साहित हुन सक्छौँ ?
– स्वाभाविकरुपमा चीन हाम्रो लगत्तैको मित्रराष्ट्र मात्र होइन, एउटा भरपर्दो तथा सधैँको सहयोगी मित्र राष्ट्र हो । कुनै समस्या नभएको मित्रराष्ट्र हो र हामीलाई सहयोग गर्दै आएको मित्रराष्ट्र हो । यसभन्दाअघि सन् २०१६ को मार्चमा मैले चीन भ्रमण गरेका बेला जुन सहमति भएको थियो, जुन संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित भएको थियो । त्यस बेलाका कुरा नै ऐतिहासिक कुरा हुन् । नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने र नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने ती सम्झौता संयुक्त विज्ञप्तिले देखाएका थिए । तीनै सम्झौतालाई आगडि बढाउने र अरु थप समयानुकूल लिने हाम्रा आवश्यकता हुन् । तदअनुसार नै हामीले कुराकानी ग¥यौँ, हामी यथार्थमा आशावादी नहुनुपर्ने कारण नै छैन ।
-अवश्य नै यो सर्वेक्षण गरिनसकेको विषय हो । अहिलेसम्म हाम्रो इच्छामा निर्भर रहेको विषय हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले काठमाडौँसम्म रेल पु¥याउने आफ्नो भिजनका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यो रेल सिगात्से पुगेको छ, अब त्यहाँबाट केरुङ हुँदै काठमाडौँ र पोखरा तथा लुम्बिनीसम्म पुग्ने हो । अहिलेको हकमा काठमाडौँ न्यूनतम गन्तव्य हो ।
त्यो सहमति भएको छ । हामीलाई हाम्रै उत्तरी भेगमा एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा पु¥याउनका लागि धेरै ठूलो समस्या थियो । अथवा, उत्तरी भू–भागको एक ठाउँबाट अर्को भू–भागमा जान मात्र होइन कि, औषधि पुर्‍याउनु परेमा, राहत तथा उद्धारका सामग्री पुर्‍याउनु परेमा, महामारीको बेलामा आवश्यक सामग्री पुर्‍याउनु परेमा, त्यस्ता बेलामा सामान पुर्‍याउन अप्ठ्यारो थियो । त्यस्तो बेलामा अस्थायीरुपमा आग्रह गरेर तिब्बती राजमार्ग प्रयोग गर्ने गथ्र्यौं । जतिबेला समस्या पर्छ त्यतिबेला काम शुरु गथ्र्यौँ । अब त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । हामीले तत् सम्बन्धमा चीनको तिब्बतको राजमार्गलाई प्रयोग गर्न सक्ने र उत्तरी भेगको कुनै पनि भेगमा हामीले सामान पुर्‍याउन सक्ने भएका छौँ । धैरै अनुकूलता भएको छ । अब तिब्बत सरकारका प्रमुखसँग मैले दुईपल्ट कुरा गर्दा उहाँहरु यसमा अत्यन्त सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँहरुको भावना सकारात्मक छ । उहाँहरुको सहयोग सकारात्मक ढंगले सहयोगी भावनाका साथ अगाडि बढ्छ ।
यहाँको नेतृत्वमा देशले बहुआयामिक ढोका खोल्दैछ, नेपाल–चीन र नेपाल–भारतका विषयमा जति पनि कुरा आएका छन्, असल छिमेकीको सम्बन्ध राखेर जानुपर्ने अवस्थामा चीनका राष्ट्रपति सीसँग आधाघण्टाभन्दा बढी समय व्यक्तिगत वार्ता गर्नुभयो । के नयाँ युगमा नयाँ दृष्टिकोण बन्दै गएको हो भन्न सकिन्छ ?
यतिबेला म भन्न चाहन्छु, नेपालले कुनै हल्काफुल्का क्षणिक कूटनीति गर्न चाहेको छैन, गरिरहेको छैन, गर्न चाहिरहेको छैन । कसैले कार्ड प्रयोग गर्ने भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्छन्, उत्तरी कार्ड, दक्षिणी कार्ड भन्ने प्रयोग गर्छन् । हामी कार्ड प्रयोग गर्ने होइन, मित्रता अगाडि बढाउन चाहन्छौं, दुवै छिमेकीसँग । यसभित्र कुनै कार्ड खेल्न खोजिने हाम्रो मनसाय हुन पनि सक्दैन, छँदा पनि छैन । र, हामी त्यस्ता कुरामा विश्वास गर्दैनौँ । हामी मित्रतामा विश्वास गर्छौं । हाम्रो मित्रता र हामी हाम्रा छिमेकीसँग पनि मित्रता अभिवृद्धिका लागि हाम्रो मित्रता उपयोग हुन सकोस् । हामी अरुको मित्रतामा सहयोगी हुन सकूँ, त्यो भूमिका खेल्न सकूँ भन्ने चाहन्छौँ ।
मानिसहरु सोचिरहेका हुन्थे, कूटनीति भनेको नबोल्नु, चुप लाग्नु हो । कतिले जे गरेपनि सहनुलाई कूटनीति ठान्ने, कतिले एकतिर ढल्कनुलाई कूटनीति ठान्ने र कतिले चिप्ला कुरालाई कूटनीति ठान्ने होइन, हामी त राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राखेर न्यायोचित कुरालाई केन्द्रमा राखेर, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अब्लिगेसन ९प्रतिवध्दता० लाई केन्द्रमा राखेर न्यायोचित ढंगले अगाडि बढ्छौँ । र, मैत्रीभावलाई सबैभन्दा मुख्य स्थानमा राखेर अगाडि बढ्छौँ भने हाम्रा नीतिहरु ठीक छन्, सही छन् । हामी यी नीतिमा सफलताकासाथ अगाडि बढेका छौँ, जो व्यवहारले देखाएको छ ।
प्रकाशित | १८ असार २०७५, सोमबार ०३:२२